किन हुन्छ नाइट-फल (स्वप्नदोष) ? के छ यसको उपचार ? « Deshko News
किन हुन्छ नाइट-फल (स्वप्नदोष) ? के छ यसको उपचार ?
निदाइरहेका बेला एकपछि अर्को चित्र, विचार, भावना तथा संवेदना अचेतन रूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो ।
मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि कुनै व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ ? राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन ।
सपना विशेष गरेर Rapid Eye Movement (REM) sleep (निद्रा) को स्थितिमा देखिन्छ । सपना विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै कि डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो वा यौनसम्बन्धी ।
यौन सपनाको सन्दर्भमा यस्तो REM स्थितिमा यौनाङ्गमा रगत भरिन्छ र पुरुषको लिङ्ग उत्तेजित हुने अनि महिलामा योनिश्राव भएको पाइन्छ ।
यौनसम्बन्धी कुरा हामी निदाएको बेलामा पनि निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ । निदाएका बेला लिङ्ग उत्तेजित हुने वा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको सपना देखिन्छ ।
प्राय:जसो पहिलो पटक यो किशोरावस्थामा हुन्छ र यसले यौन विकास राम्रोसँग भएको संकेत गर्छ । यही क्रममा कतिपय व्यक्तिले यौन चरमसुख पनि प्राप्त गर्छन् ।
यसरी निदाएका बेला सपनामा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखेर वीर्य स्खलन हुनुलाई नै बोलीचालीको भाषामा स्वप्नदोष भनिन्छ ।
अंग्रेजीमा भने wet dreams, night fall वा nocturnal emmisions जस्ता शब्दको प्रयोग यही अवस्थालाई वर्णन गर्न गरिन्छ ।स्वप्नदोष भनिए पनि वास्तवमा यो कुनै दोषयुक्त कुरा नभै स्वाभाविक रूपमै हुने कुरा हो ।
१५ वर्षको भैसक्दा यस्तै ५० प्रतिशतजति किशोरले यसको अनुभव गरिसकेका हुन्छन् । यस्ता यौन सपना एकदमै जीवन्त हुने र वास्तविकतासँग छुट्टयाउनै नसकिने अनुभव प्रशस्त युवाको छ ।
यस्ता सपनामा कहिले आफूले वास्तविक जीवनमा यौनसम्बन्ध राख्न नमिल्ने नातेदार, सार्वजनिक स्थान वा जनावर पनि देखिन सक्छ ।
कतिपय यस्ता यौन उत्तेजक सपना देखिसकेर वीर्य स्खलन हुनासाथ बिउँझिन्छन् भने अर्का थरी वीर्य स्खलन हुनै लाग्दा बिउँझिन्छन् ।
केहीको त निद्रा नै खुल्दैन र बिहान बिउँझिएपछि मात्र थाहा पाउँछन् ।
किन यस्तो हुन्छ ?
अचेलका केही अनुसन्धानले टेस्टेस्टोरोन नामक हार्मोनको शरीरमा हुने मात्रासँग स्वप्नदोष हुने वा नहुने कुरालाई जोडेका छन् ।
स्वप्नदोष हुने व्यक्तिहरूमा टेस्टेटोरोनको मात्रा बढी हुने कुरा बताइन्छ । हुन त यौनका दृष्टिले स्वस्थ व्यक्तिमा यो हार्मोन हुन्छ नै, तर पनि कुनै व्यक्तिलाई स्वप्नदोष नै नहुन सक्छ र यो पनि एकदमै प्राकृतिक कुरा हो ।
स्वप्नदोषका सम्बन्धमा उचित तथा सही जानकारी नपाउने हुनाले कतिपय किशोर तथा युवाहरू गहिरो चिन्तामा पर्छन् ।
उनीहरूले आफूलाई कुनै गम्भीर रोग लागेको भन्ने मान्छन् । तन्ना वा लगाएको लुगामा वीर्यको दाग लाग्ने अनि कसैले थाहा पाउला भन्ने कुराले पनि निकै चिन्ता हुन्छ ।
सपनाको अर्थ लगाउने चलन नेपाली समाजमा पनि प्रशस्तै छ । अझ यस्ता किसिमका सपनाको अर्थ के होला भन्ने चासो किशोरावस्थामा निकै प्रबल रूपमा हुन्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एउटा प्राकृतिक तथा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले यसको उपचारको आवश्यकता पर्दैन । अनावश्यक रूपमा उपचार गराउँदा तपार्इंलाई होईन कि उपचारकर्तालाई मात्र फाइदा हुन्छ ।
जब यौनसपना देख्नु कुनै पनि प्रकारले बेठीक नभएपछि तपाईंले ठीक भएन भन्ने कुरा तर्कसंगत रहँदैन ।
तपाईंको प्रजनन तथा यौन प्रणालीले जबसम्म राम्रोसँग काम गरिरहन्छ यस प्रकारको घटना दोहोरिरहन सक्छ अर्थात् यसलाई तपाईंले चाहँदैमा सजिलै रोक्न सकिँदैन ।
यसलाई कम गर्न यौन चरमसुख पाउने वा वीर्य स्खलन हुने उपाय जस्तै कि हस्तमैथुन वा यौन सम्पर्क सहयोगी हुन सक्छन् ।
त्यसबाहेक तनावरहित जीवन, उत्तानो परेर सुत्ने, सुत्दा खुकुलो पहिरन लगाउने, यौन चित्र वा चलचित्र नहेर्ने, ध्यान गर्नेदेखि लिएर कतिपय जडीबुटिको सेवनको कुरा पनि छ ।
यस्ता यौन सपना स्वभाविक हुन् र हानिकारक हुँदैनन्, त्यसैले चिन्ताको कुनै कारण छैन । सामान्य जीवनमा नहुने कुरा नै यस्ता यौन सपनामा हुने भएकाले तपाईंले अनावश्यक चिन्ता लिनु पर्दैन । यति गर्न सके तपाईंको समस्या समस्या रहँदैन ।
तपाईंलाई यस्तो किसिमको चिन्ताले असजिलो पारेको छ भने मनोचिकित्सकको सहयोग लिने विषयमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ ।
निद्रामा वीर्य स्खलन भएपछि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वीर्य यौनाङ्ग क्षेत्रमा रहिरहे संक्रमण हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले बिउँझिएपछि लिङ्ग, अण्डकोष तथा त्यसपछि वरिपरिको क्षेत्र साबुन–पानीले धुनुपर्छ ।
तन्ना वा लगाएको लुगामा वीर्यको दाग लाग्ने अनि कसैले थाहा पाउला भन्ने कुराको पनि निकै चिन्ता हुन्छ । अन्डरवेयर वा कट्टु लगाएर सुते त्यसलाई मात्र धुनु तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ ।